Eritariya oo Dhibaatadii ay ka Waday Geeska Afrika ay Noqotay mid Saamaysa cid Walba – Rasaasa News
Jun 20, 2009 Eritaria, ethiopia, Ogaden, somalia
Xukuumada Eritariya oo ah xukuumada, dadka haatan xukuma Itobiya [Tigray] ay hal qoomiyad oo iska xiga Itobiya Inteeda kale yihin, waxayna wadaagaan dhaqan iyo af kaliya. Eritariya iyo Tigray waxaa ay la mid yihiin sida Ogaden ay ku tahay Somaliya, sidaasi daraadeed xornimadii ay qaateen waxaa ay ahayd mid ay qabyaalad ku heleen ee ma ayna ahayn mid sharci ah, hadii sharci la raaci lahaana waxaa xornimada ka hor qaadan lahaa Ogadeeniya.
Eritariya oo ah mida abuurtay guul darada haysata halganka ummada Somalida Ogadeeniya ayaan iyadu ahayn mid wada danta Somalida Ogadeeniya, waxayna had iyo goorba jeceshahay in ay xagal daaciso halganka ay wado Somalida Ogadeeniya.
Arimaha ugu daran ee ay Eritariya ka wado Ogadeeniya waxaa ka mid ah; burburinta halbowlayaasha dhaqaale Ogadeeniya, iska horkeenka dadka Somalida Ogadeeniya iyo waliba abuurida khilaafka keenay in ay Jabhadu burbur qarka u saaraanto.
Shacabka Somalida Ogadeniya waxaa uu dagan yahay Ogadeeniya wax alaale wixii horumar ah ee dalku lee yahay waxaa faa,iidadeeda leh dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Hadii uu gumaysiga laga saaro waxaa leh shacabka, hadii uu gumaysigu joogana waxaa ka faa,iidaysan dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa run ah in wadanigu uusan marna burburinin waxyaabaha uu dalku lee yahay iyo mashaariicda ay ka faa,iidaysanayaan dadweynuhu, Aduunka oo dhan waa la soo gumaystay dad ayaana ku noolaa Honkong waxaa uu xornimo helay 1997, waadna la socotaan heerka uu ka gaadhay farsamada iyo wax soo saarka ugu dambayntiina waxaa ay ku noqotay gacanta dadkii lahaa ee shiinaha.
Waxaan jeclahay in aan u sheego Jwxo-shiil iyo Eritariyiinta la socda in ayna Jabhada ONLF dhaqan u lahayn in ay burburiyaan Ilaha dhaqaalaha ee dhulka Somalida Ogadeeniya, waxa ugu badan ee ay u dagaalamaysaan waxaa weeye in uu dadkeenu helo nolol iyo xornimo, laakiin ummada dagaalamayso burbur iyo curyaaminta ilaha nolosha.
Waxaana meesha ka muuqata in xukuumada Eritariya ay leedahay dano ka waaweyn taageerada beenta ah ee ay siinayso kuwa ka soo horjeeda halganka iyo shuruucda Jabhada ONLF ee burburinaya Ilaha dhaqaalah ee ummada.
dhibaatada ay eritariya ku hayso dadweynaha geeska afrika iyada oo is leh iska celi xukuumada Itobiya kaliya ma ayna taabanin dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee waxay taabatay dadweynaha Eritariya oo uu qaxootigoodu buuxiyey dalalka Geeska Afrika.
Hadaba todbaadkii ina dhaafay ayey wariyeyalaa ka soo baxsaday dawlada Eritariya ay magaalada Paris kaga dhawaaqeen Ideecad loogu magac daray Radio Erena. Ideecadan oo hawada si toos ah looga dhagaysan doono iyada oo ku baxaysa afka Tigrayga iyada oo adeegsanaysa allada Sateliteka, waxaa la filayaa in ay waxyeelo wayn u gaysan doonto xukuumada Eritariya oo iyadu an khilaaf mooye wax samo ah shao ku lahayn.
Masuuliyiin Xilalkii ay Kaalinka 5aad ka Hayeen Laga Caydhiyey